"Bronhikum" (Elixir): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
Coughing - यो अप्रिय लक्षण धेरै रोगहरु सँगसँगै छ। अक्सर यसको उपचारको लागि जो विकृति को सुधार को मुख्य विधि संग राम्रो तरिकाले जाने व्यक्तिगत लागूपदार्थ, काम तोकिएको छ। एक यस्तो दबाइ "Bronhikum" (Elixir) छ। उपकरण पुस्तिका को आवेदन मा यस लेखमा तपाईंको ध्यान प्रस्तुत गरिनेछ। तपाईं आफ्नो प्रयोग को peculiarities सिक्न हुनेछ। हामी पनि "Bronhikum" (Elixir) बच्चाहरु र वयस्क लागि प्रतिक्रियाहरू को भाग हो जो वास्तवमा, उल्लेख गर्नुपर्छ।
यो संरचना र दबाइ को प्रकार
"Bronhikum" - को Elixir खोकी को। दबाइ तरल रूप मा छ। यो रक्सी tinctures थपेर उत्पादन गरिएको छ। यो खातामा रोजगार को अवधिमा एक सचेत राज्य आवश्यक गर्नेहरूलाई लिन आवश्यक छ।
infusions Grindel, मूल wildflowers, quebracho छाल, thyme र primrose मूल: दबाइ को संरचना निम्न घटक समावेश गर्नुहोस्। सबै पदार्थ अलग निर्मित छन् र त्यसपछि एक निश्चित अनुपात मा मिश्रित।
प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
coughing द्वारा "Bronhikum" गर्नुपर्छ को प्रयोग। यो bronchi को involuntary संकोचन विभिन्न कारण उत्पन्न गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ। सबै अवस्थामा, दबाइ मदत गर्न सक्छ छैन। त्यो किन दबाइ उद्देश्य सल्लाहको लागि चिकित्सकको परामर्श गर्न त महत्त्वपूर्ण छ। को संरचना को प्रयोग को लागि संकेत हो:
खोकी, एक viscous, stringy र sputum को गठन सँगसँगै;
ब्रोन्कियल edema, र आफ्नो खकार मा वृद्धि;
एक स्टेथोस्कोप सुनेर गर्दा हल्ला वा wheezing उपस्थिति पनि दबाइ को नियुक्ति छ जसमा परिस्थिति लागू हुन्छ।
दबाइ मद्दत गर्दैन एलर्जी खोकी। यो सिफारिस गर्दा paroxysmal कटौती bronchi र फोक्सोमा भाइरल र जीवाणु रोग समयमा।
केही अवस्थामा, दबाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ?
"Bronhikum" तयारी (Elixir) प्रयोगको लागि निर्देशन को अरू के बोल्छ? सार उपचार गर्न contraindications संकेत गर्छ। निम्न अवस्थामा तिनीहरूलाई बीच प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ।
को चिकित्सा तयारीको को constituents गर्न अतिसंवेदनशीलता उपस्थिति दर्ता गर्दैन। तपाईं पहिले नै संरचना एलर्जी खोकी निर्मूल गर्न सक्षम छ भन्ने थाहा छ। चरम सावधानीपूर्वक दबाइ कलेजो वा मृगौला रोग संग बच्चाहरु र मान्छे प्रयोग गर्नुपर्छ। बालक जन्ममा र स्तनपान दबाइ को अवधिमा सामान्यतया नियुक्त गरिएको छैन।
"Bronhikum" (Elixir): प्रयोग र औषधिको खुराक को लागि निर्देश
दबाइ वयस्क र युवा बच्चाहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवेदन अलग को यो योजना मा। व्यक्तिगत खुराक एक विशेषज्ञ नियुक्त गरेको छैन भने, दबाइ निर्देशन अनुसार प्रयोग गरिन्छ।
लागूपदार्थ 15 वर्ष मुनिका बच्चाहरु आधा वा सारा चम्मच (2.5-5 एमएल) razovo दिएको छ। आवेदन बाहुल्य प्रति दिन 2-3 सेट छ।
वयस्क विरामीहरु चिकित्सा स्वागत को लागि 5.7 एमएल (1 चम्मच) को एक खुराक मा प्रशासित। दिन मा6आवेदन सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ।
आवेदन अवधि सामान्यतया एक भन्दा बढी सप्ताह छ। कि समय पछि राम्रो लाग्छ भने, तपाईं दबाइ प्रयोग रोक्न र चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ।
तयारीको "Bronhikum" मा (Elixir) निर्देश पुस्तिका उहाँले प्रायजसो राम्रो तरिकाले सबै उमेरका विरामीहरु द्वारा सहन छ भनेर भन्छन्। पक्ष प्रतिक्रिया को दुर्लभ घटना दबाइ को प्राकृतिक संरचना कारण हो।
कहिलेकाहीं दबाइ एलर्जी हुन सक्छ। यो अक्सर दाना र खुजली प्रकट। तर, थप गम्भीर अवस्थामा mucosal edema र laryngeal विकास। यस मामला मा, तुरुन्तै चिकित्सा सल्लाह खोज्छौं। कहिले काँही चिकित्सा अपच वा पेट दुखाइ हुन सक्छ। तिनीहरूले सामान्यतया दबाइ को एक अधिमात्रा वा को गलत प्रयोग गर्न श्रेय छन्।
बहुमत मा चिकित्सा सकारात्मक राय खेल्छ। दबाइ सजिलै स्वीकार गरिएको छ, तर विरामीहरु रक्सी aftertaste रिपोर्ट। यो धेरै सुखद नहुन सक्छ। पानी संग दबाइ तल धुन गर्नुपर्छ यस्तो लक्षण समाप्त गर्न।
चिकित्सकहरु दबाइ धेरै औषधि राम्रोसँग जान्छ कि रिपोर्ट। त्यसैले, विशेषज्ञहरु अक्सर सल्लाह दिन्छन् एन्टिबायोटिक र antiviral दुवै माथिको दबाइ गर्न एजेन्ट। तर, एक टिप्पणी छ। को संरचना antitussives प्रयोग गर्न सकिँदैन। यो बिरामीको अवस्था गिरावट नेतृत्व हुनेछ। साथै, जबकि sorbents प्रयोग दुई घण्टा एक ब्रेक लिन।
विरामीहरु रिपोर्ट "Bronhikum" को संरचना कि - एक बरु महंगा उपकरण। दबाइ को 130 milliliters तपाईं 450 rubles खर्च हुनेछ। यो वास्तवमा कहिलेकाहीं दबाइ बारेमा नकारात्मक समीक्षा को गठन को लागि एक कारण हो।
उपभोक्ताहरु दबाइ धेरै प्रभावकारी छ भन्छन्। सक्रिय सामाग्री सबै प्राकृतिक हो। तिनीहरूले ब्रोन्कियल ट्यूब र कफ देखि सुनिंनु कम। अत्यधिक पिउने को प्रभाव बृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ। दबाइ को ब्रोन्कियल ट्यूब को contractility बढ्छ। यो जसद्वारा खकार उत्सर्जित खोकी, परिणाम। डाक्टर कि प्रयासमा खोकी तपाईं असुविधाको धेरै ल्याउनेछ देखि, रात मा भाग लिन खराब छ भन्छन्। पनि दबाइ को अनुपात केही रक्सीको सामग्रीको बारेमा डाक्टर सम्झाउने। रक्सी निर्भरता दबाइ संग मान्छे बिल्कुल contraindicated छ। बच्चाहरु को लागि दबाइ चरम सावधानीपूर्वक दिइएको छ।
तपाईं प्राकृतिक उपाय "Bronhikum" बारे सिके। निर्देशन खोकी, उपभोक्ता समीक्षा लेखमा प्रस्तुत छ। यो एक धेरै प्रदर्शन लक्षण को प्रकृति निर्भर उल्लेख लायक छ। केवल एक विशेषज्ञ हुन सक्छ bronchi शक्ति कटौती कारण के निर्धारण। अप्रिय परिणाम जोगिन गर्न छैन आत्म-medicate गर्न आवश्यक छ किन कि छ। आफ्नो डाक्टर भ्रमण र परेशान लक्षण बारेमा उसलाई भन। मात्र एक डाक्टर सही दबाइ को प्रभाव आफ्नो मामला मा वर्णन गरिएको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
"Miaser": प्रयोग, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
"Flemoksin" चक्की। तीव्र संक्रमण को उपचार को लागि प्रयोगको लागि निर्देशन
SV12 मौखिक कुल्ला: संरचना, कार्य, समीक्षा
Divnomorskoe: एक बोर्डिङ घर "समुद्री तट"। जहाँ आराम लागि रहन
म भाग्यमानी किन?
नराम्रो "Okeanologii": समीक्षा, निर्देशन
गाढा दूध संग प्यानकेकहरू र कुकीहरू र डोनट
"गणराज्य" (कार): निर्दिष्टीकरण
एक उपाय रूपमा त्रुटि कोड 963 प्ले बजार?
Minimalism - यो छ ... के minimalist डिजाइन छ?
हथौडा भगवान थोर - दिग्गज हतियार स्कैनडिनेविया देखि आउनुहोस्। अर्थ आकर्षण र टाटु छवि हथौडा थोर
धेरै रोगहरु धेरै प्रभावकारी रूपमा Wobenzym सामान्य दबाइ समीक्षा